Federico Moccia: akwụkwọ | Akwụkwọ ugbu a
Encarni Arcoya | 14/10/2021 08:09 | Akwụkwọ
Isi ihe onyonyo maka akwụkwọ Federico Moccia: Pinterest
Kwuo banyere Federico Moccia na akwụkwọ ya bụ ime ya site n'aka onye ode akwụkwọ nke bụrụla onye isi n'ịre akwụkwọ akụkọ maka ndị nọ n'afọ iri na ụma. N'eziokwu, a na -ekwu na ọ bụ ekele maka akụkọ ha mere ka ụdị ndị ntorobịa toro eto, isiokwu ndị okenye mana a gwara ha n'ụzọ ndị ntorobịa n'onwe ha maara ha n'ụzọ "dị nro".
N'ime ọtụtụ afọ, Federico Moccia emela onwe ya aha n'etiti ndị ukwu, na mgbe ọ bụla ọ wepụtara akwụkwọ ọ na -enwe ihe ịga nke ọma, ọ bụghị naanị n'obodo ya, kamakwa n'ọtụtụ ụwa. Mana kedu akwụkwọ Moccia nwere? Kedu akụkọ dị n'azụ onye ode akwụkwọ a? Chọpụta ihe niile n'okpuru.
1 Ọnye na -bụ Federico Moccia
2 Akwụkwọ Federico Moccia
2.1 Saga mita atọ n'elu igwe
2.2 Saga Ndo ma ọ bụrụ na m akpọ gị ịhụnanya
2.3 Saga Tonight gwa m na ị hụrụ m n'anya
2.4 Saga Oge ahụ nke obi ụtọ
2.5 Akwụkwọ akụkọ onwe
Ọnye na -bụ Federico Moccia
Ebe e si nweta ya: Ọha
Ihe mbu ị ga -amata gbasara Federico Moccia bụ na ezigbo agụụ ya, tupu akwụkwọ abanye na ndụ ya, bụ telivishọn na sinima. Ọ bụghịkwa obere, ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na nna ya bụ Giuseppe Moccia, Pipolo, onye na -ede ihe onyonyo na televishọn, onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị na onye ntụzi nke ọtụtụ ihe nkiri na ihe nkiri TV.
Ihe niile o bi n'oge ọ bụ nwata gbara sinima gburugburu na nna ya kụnyere n'ime ya wee gosi, yabụ, mgbe ọ tozuru oke ịrụ ọrụ, ọ họọrọ dị ka onye na -ede akwụkwọ na comedies Italiantali. Kpọtụrụ, ị nwere ike ịchọta ntụnyere ya na fim sitere na 70s na 80s.
Ọ malitere ịrụ ọrụ dị ka onye na -enyere onye nduzi nke Attila flagello di Dio, ihe nkiri nke nna ya mere.
Otú ọ dị, Afọ 5 ka e mesịrị, ọ malitere ihe nkiri, Palla al centro. Nsogbu a bụ na ihe ịga nke ọma nna ya enweteghị n'ime ya, a hụghịkwa ihe nkiri ahụ, nke mere na Federico Moccia kpebiri ịgbanwe sinima maka telivishọn, ihe ọ na -eme otu afọ gara aga, ebe o sonyere onye na -enyocha ihu na oge izizi nke ụmụ nwoke nke atọ. Na 3 ọ bụ onye isi na onye edemede Colegio na nke a nwere ntakịrị ihe ịga nke ọma.
Ya mere, ọ malitere ijikọ telivishọn, na -ede ederede maka mmemme na -aga nke ọma, yana sinima.
N'agbanyeghị nke ahụ, Federico Moccia wepụtara oge maka akwụkwọ ya. Ọ bụ na 1992 mgbe ọ dechara ide mita atọ n'elu igwe, nke ga -abụ akwụkwọ akụkọ mbụ ya. Na, dịka o mere ọtụtụ ndị ode akwụkwọ, ọ nwere nsogbu zuru oke maka onye mbipụta ọ bụla ikpebi ịtụkwasị ya obi. N'ihi ya, o kpebiri ka ya na obere onye mbipụta ebipụta ya. N'oge ụdị ahụ, akwụkwọ ahụ ewepụghị, Moccia lekwasịrị anya n'ọrụ ya na sinima, ya na ihe nkiri Mixed class 3ª A. Ọzọkwa enweghị ihe ịga nke ọma.
Ọ laghachiri na telivishọn mana, na 2004, ọ kwesịrị ịhapụ ya mgbe akwụkwọ mbụ ya malitere ịpụta ka afọ iri na abụọ ebipụtachara ya. Nke ahụ bụ ikwu na ihe ịga nke ọma bịara ya, bụrụ ihe dị ịtụnanya na ụlọ akwụkwọ sekọndrị ndị Rom, sitekwa ebe ahụ ka a sụgharịa ya n'ọtụtụ asụsụ wee bipụta ya na mba dị iche iche dịka Europe, Japan, Brazil ... N'otu afọ ahụ akwụkwọ ahụ Enwekwara mmegharị ya na sinima, na -ebido ozugbo, wee na -akwalite akwụkwọ akụkọ ahụ.
N'ezie, n'oge ahụ Federico Moccia tụgharịrị n'akụkụ akwụkwọ ya, wee nwaa ihu ọma ya na akwụkwọ akụkọ nke abụọ, enwere m agụụ maka gị, usoro nke akwụkwọ akụkọ mbụ ya, yana otu ihe ịga nke ọma dị ka nke a, mmegharị gụnyere.
Akwụkwọ abụọ ahụ bụ naanị mmalite ihe omume Moccia, ọ bụkwa ya bụ ndị na -esote pụta pụtara mmeri ọzọ ruo taa.
Akwụkwọ Federico Moccia
Isi mmalite: Twitter
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgụ akwụkwọ Akwụkwọ Federico Moccia n'usoro, mgbe ahụ anyị ga -aza ajụjụ ebe a ka ihe ọ bụla ghara ifunahụ gị. Buru n'uche na ihe ka n'ọnụ ọgụgụ n'ime ha sitere na sagas, ya bụ, ha nwere opekata mpe akwụkwọ abụọ. Mgbe ahụ ọ nwere ụfọdụ ndị nọọrọ onwe ha, n'agbanyeghị na amachaghị ha nke ọma.
Saga mita atọ n'elu igwe
Ihe mejupụtara ya bụ ọtụtụ akwụkwọ: "Mita atọ n'elu igwe", "Achọrọ m gị", "ugboro atọ gị", "mụ na Babi".
Nke ikpeazụ bụ akụkọ n'ezie, ọ bụghị akwụkwọ akụkọ, mana ọ dabara na akụkọ na agwa ndị pụtara na saga a.
Akwụkwọ akụkọ ahụ na -ewebata anyị otu ndị enyi, na agwa ha na ụzọ ha site n'oge uto ruo n'ịbụ okenye, na -agbalị ịchọta ọnọdụ ha n'ụwa. Ndị protagonists na -ebi akụkọ ịhụnanya na ụdị Romeo na Juliet kachasị ọcha, mana ọgbara ọhụrụ.
Saga Ndo ma ọ bụrụ na m akpọ gị ịhụnanya
Mebere akwụkwọ abụọ, "Ndo ma ọ bụrụ na m akpọ gị ịhụnanya" na "Ndo mana m chọrọ ịlụ gị." Ọ bụ otu n'ime ihe ịga nke ọma kachasị nke onye ode akwụkwọ na eziokwu bụ na maka ọtụtụ ọ dị mma karịa akwụkwọ akụkọ mbụ ya.
Enwere akwụkwọ nke atọ, "Na -achọ Nikki nke ukwuu", mana atụgharịbeghị ya n'asụsụ Spanish na ọ bụ naanị ndị hụrụ saga n'anya maara ịdị adị ya.
Akụkọ a na -ekwu maka ịhụnanya dị n'etiti di na nwunye nwere nnukwu afọ dị iche na ihe mgbochi ha ga -emeri iji nwee obi ụtọ n'ikpeazụ, ma ndị enyi, ezinụlọ, wdg.
Saga Tonight gwa m na ị hụrụ m n'anya
E dere akwụkwọ abụọ: "Gwa m n'abalị a na ị hụrụ m n'anya" na "Otu puku abalị na -enweghị gị."
N'okwu a, onye na -eme ihe nkiri bụ nwata nwoke ahụ, Nicco, onye enyi ya nwanyị tụfuru na onye zutere ụmụ agbọghọ Spanish abụọ na mberede, onye ọ malitere inwe mmetụta karịa mmasị. Ruo mgbe ha ga -apụ n'anya.
Saga Oge ahụ nke obi ụtọ
Ejikwa akwụkwọ abụọ: "Oge ahụ nke obi ụtọ" na "Gị, naanị gị."
N'ime akwụkwọ akụkọ ahụ, ọ na -ewebata anyị na mkpụrụedemede abụọ dịtụ iche na nke nkịtị, ebe ọ bụ na protagonist bụ otu n'ime ndị kasị baa ọgaranya n'ụwa na nwa agbọghọ ahụ bụ piano prodigy. Mana otu ihe na -eme na -eme ka ụzọ abụọ ahụ gafere.
Akwụkwọ akụkọ onwe
Dịka anyị siri kwuo, n'etiti akwụkwọ Federico Moccia o nwekwara ụfọdụ ndị ọzọ nọọrọ onwe ha, ya bụ, ha nwere mmalite na njedebe. Ndị a bụ:
Njem ahụ. Ọ nwere ike bụrụ otu n'ime akwụkwọ akụkọ kacha dị egwu nke onye ode akwụkwọ, ebe ọ bụ na anyị ejighi aha a. Ọ bụ akwụkwọ akụkọ dị mkpirikpi nke ọ na -atụgharị uche na ọnwụ nna ya.
Carolina hụrụ n'anya. Onye protagonist nke akwụkwọ akụkọ ahụ dị afọ 14, nwa agbọghọ dịka ndị ọzọ. Ruo mgbe ọ sonyere otu ụmụ agbọghọ nọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị na nnọkọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, nsusu ọnụ, ọbụbụenyi na ọdịnala na ezi ịhụnanya na -amalite.
Ị gụla ihe ọ bụla site n'aka Federico Moccia? Kedu akwụkwọ kacha masị gị gbasara onye edemede? Ka anyị mara!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Federico Moccia: akwụkwọ